Radio Dhangadhi 90.5 MHz | २०१८ मा बलिउडः कुन फिल्मसँग कसको भिडन्त ?
Friday, October 18 2019, 20:10 | शुक्रबार ०१, कार्तिक २०७६ २०:१०
मैदानमा एक से एक खेलाडी
शनिबार, १६ मङि्सर २०७४| Radio Dhangadhi
आउँदो बर्ष चाहिं कस्तो रहला त ?
आउँदो बर्ष बिग बजेट फिल्महरुबीच टक्कर हुने देखिएको छ । ईद, दिपावली, क्रिसमस, रिपब्लिक डे, होली जस्ता अवसर पर्खेर बसेकाहरुका थुप्रै फिल्मले सोहि अनुसार रिलिज डेटको तालमेल मिलाएका छन् ।
२०१८ को सुरुवात अक्षय कुमारको फिल्मबाट हुँदैछ । र, बर्षको ह्याप्पी इन्डिङ भने शाहरुख खानको फिल्मले गर्नेछ । यी दुबै फिल्मको कुनै न कुनै फिल्मसँग टक्कर पर्नेछ । यहाँसम्म कि, ‘बद्रीनाथ की दल्हनिया’ को सफलता देखेर होलीमा समेत दुई फिल्म एकसाथ रिलिज हुँदैछ ।
हेरौं, २०१८ मा कुन फिल्मसँग कसको टक्कर पर्दैछ ?
पैडमेन भर्सेस विश्वरुपम २
अक्षय कुमारको फिल्म ‘पैडमैन’ २६ जनवरी रिलिज हुँदैछ । तर, यो सोलो रिलिज हुनेवाला छैन । यससँग अरु दुई फिल्म जुध्दैछ । फिल्म हो नीरज पान्डेको ‘अय्यरी’ । यो भन्दा चुनौती त, कमल हसनको मेगा बजेट फिल्म हुनेछ । फिल्म हो, विश्वरुपम(२ ।
रेस-३ भर्सेस फन्ने खान
यसपाली अनौठो संयोग के जुरेको छ भने, सलमान खान भर्सेस ऐश्वर्य राय बच्चन । यी दुई पूर्व प्रेमी(प्रेमिकामा कसले बाजी मार्छ रु नतिजा हेर्न भने आगमी इद पर्खनुपर्नेछ । त्यसो त ईद सलमानको पेवा जस्तै हो, रिलिज डेटको हिसाबले । ईद उनलाई फाप्ने पनि गथ्र्यो । पछिल्लो फिल्मले भने लोप्पा ख्वाएको छ । यसपालीको ईदमा पनि उनको तगारो छ । सलमान खानको रेस(३ लाई फन्ने खानले टक्कर दिनेछ । फन्ने खान खान ऐश्वर्य राय बच्चन, अनिल कपुर अभिनित फिल्म हो ।
बागी-२ भर्सेस मणिकणिर्का
२७ अप्रिलमा पनि दह्रो भिडन्त हुने देखिएको छ । त्यसबेला मैदानमा टाइगर श्राफ र कंगना रनवट देखिनेछन् । दुबै एक से एक विकाउ स्टार हुन् । टाइगरको ‘बागी(२’लाई चुनौती दिन कंगनाको ‘मणिकणिर्का’ उत्रनेछ ।
शाहरुख खानको फिल्म भर्सेस केदारनाथ भर्सेस रोहित शेट्टी
अक्सर रोहित सेट्टीको फिल्ममा शाहरुख खान देखिन्थे । उनीहरुको कम्बिनेशन पनि गजब हुन्थ्यो । तर, यसपाली शाहरुख खान र रोहित सेट्टी विपरित दिशाका खेलाडी बनेर मैदानमा प्रवेश गर्दैछन् । आनन्द एल रायले निर्देशन गरिरहेको शाहरुख खानको फिल्मसँग रोहित सेट्टीको ‘टेम्पर’को रिमेक भिड्नेछ । दुबैसँग सिंग जुधाउँदैछ, सारा अली खान अभिनित फिल्म ‘केदारनाथ’ । सैफ अली खानकी छोरी साराको लागि यो अग्निपरीक्षा पनि हो । उनीसँग सुशान्त सिंह राजपूतले स्क्रिन शेयर गरेका छन् ।
ड्राइभ भर्सेस हेट स्टोरी- ४
होलीको उल्लासले छोपिरहेको बेला अरु दुई फिल्मले पनि मौकामा चौका हान्दैछ । यसपाली होलीमा बलिउडको हट प्रmेन्चाइजी ‘हेट स्टोरी’को चौथो भाग रिलिज हुँदैछ । त्यहीसँग टक्कर लिदैछ, सुशान्त सिंह राजपूतको फिल्म ‘ड्राइभ’ले ।
ठग्स अफ हिन्दुस्तान भर्सेस टोटल धमाल भर्सेस हाथी मेरे साथी
२०१८ को सबैभन्दा बढी प्रतिक्षारत फिल्म हो, ठग्स अफ हिन्दुस्तान । त्यसो त आमिर खानको फिल्मले धमाका मच्याउने नै भयो । अक्सर आमिर खानको फिल्म सिंगल रिलिज हुने गथ्र्यो । यसपाली भने अरु दुई फिल्म पनि आमिरसँग भिड्ने हिम्मत गरेका छन् । दिपावलीको अवसरमा ठग्स अफ हिन्दुस्तान रिलिज हुने पक्कापक्की भएर पनि त्यससँग सिङ जोड्दैछ, राण दग्गुबातीको फिल्म ‘हाथी मेरा साथी’ र अजय देवगनको फिल्म ‘टोटल धमाल’ ।
अजय देवगनको फिल्म भर्सेस जंगली
विद्युत जामवालको फिल्म ‘जंगली’ १९ अक्टुबरमा रिलिज हुने भएको छ । त्यही फिल्मसँग भिड्दैछ, अजय देवगन र तब्बूको फिल्म पनि । अजयको रोमान्टिक कमेडी फिल्मलाई आकीव अलीले निर्देशन गर्दैछ ।
परमाणु भर्सेस हिचकी
२३ फेब्रुअरीमा जोन अब्राहमको महत्वकांक्षी फिल्म परमाणु रिलिज हुँदैछ । र, त्यो फिल्मलाई टक्कर दिदैछ रानी मुखर्जीको फिल्म ‘हिचकी’ले । रानी र जोन दुबै लामो विश्रामपछि तंग्रिएका हुन् ।
शनिबार १६, मङि्सर २०७४ ०६:५२ मा प्रकाशित ।